China Ibhokisi yokudlala yabantwana iphepha lebhokisi yesutikheyisi enesiphatho somvelisi kunye noMthengisi | Huaguang
Ibhokisi yokudlala yabantwana ibhokisi yekhadibhodi enesiphatho
Ityesi yephepha enesiphatho
Ubukhulu: 25 * 18 * 8.5cm
Est. Ixesha (iintsuku) 7 15 Kuya kuthethathethwana
Le sutikheyisi yephepha isetyenziselwa ukusongela izipho zabantwana okanye ukucwangcisa iithoyi ezincinci zabantwana. Ithoni yayo ephambili iblue kwaye imhlophe, uyilo lwepateni yamachaphaza amaza, ijongeka icocekile, ikhululekile kwaye intle, ilungele abantwana. Kwaye ukuhambelana kombala, andinakukunceda kodwa ndifuna ukusebenzisa eli phepha lisingathe ityesi, kwezi zinto sele zichaziwe ezichaphazela ukutshintsha kombala kwezinto eziprintiweyo.
Phrinta kwinkqubo yokuprinta nokugcina, umbala wayo, ukukhanya, ukugcwala kuhlala kuguquka, nokuba iyinki ye-monochromatic, okanye ngaphezulu kweentlobo ezimbini ze-inki yombala, ngaphakathi nangaphandle kwentshukumo, umbala unokuba mnyama, kwaye ube kukukhanya. Umgangatho wokuprinta okwinqanaba eliphezulu yile: ibhetshi yeemveliso ngaphambi nasemva kombala omnyama wokukhanya ukuba ungaguquguquki, ubemibalabala, ngaxeshanye uhambelane nesampulu yesigaba sombala omnyama kunye nokukhanya okunzulu kweinki.
I-ink iyakhanya ukumelana nombala kunye nombala
I-ink ekukhanyeni kwelanga, umbala wayo kunye nokukhanya kwayo kuya kwahluka ngokwamaqondo oguquko, ukukhanya okunganyangekiyo kwaye ayitshintshi ithoni ye-inki, kwilanga elomeleleyo, yonke imibala ye-ink iya kuvelisa amaqondo ohlukeneyo otshintsho. Zimbini iintlobo zotshintsho.
Ukuphela: phantsi kwesenzo sokukhanya kwelanga i-ray yelanga, ukumelana nokukhanya kwe-inki kuhlwempuzekile, kulahlekile umbala oqaqambileyo wokuqala, umbala uba grey ngombala. Ingakumbi umbala wokukhanya oyinki kunye nemibala emine esetiweyo yoshicilelo xa umbala omthubi nobomvu imibala emibini iphela ngokukhawuleza, kunye ne-cyan ne-inki ziyacotha.
Ukuchithwa kombala: ngokuchasene nokushicilela i-inki emnyama, utshintsho lombala phantsi kokusebenza kwelanga kumnyama, umbala utshintshile, abantu balubiza ngolu tshintsho.
Ipleyiti yokuprinta ye-Offsctdruckmasenten ayinako ukwahlulwa ukumanzisa indawo engenanto yeplate, i-offsctdruckmasenten lelokuqala lamanzi kwi-inki, amanzi ngokuqinisekileyo aya kubonakala emulsifying. Umbala we-emulsion color uya kuncitshiswa, kodwa, emva kokuba umphunga wamanzi ungawubuyisela umbala wokuqala, ke ngoko xa amanzi esiba maninzi, isixa semulsion esikhulu, siya kubangela umbala. Ngokukodwa, iqondo emulsification ye-inki eyahlukileyo ngokupheleleyo ithoni kunye, isenzeko sokujika umbala sibaluleke ngokukodwa.
Iimpawu zephepha kwiphepha eligudileyo
Ukutyibilika komphezulu wephepha kunye nekopi yokuprintwa inobuhlobo obusondeleyo, hayi iphepha eligudileyo lihlala lifuna uxinzelelo olukhulu, ukuze lenze i-inki kwaye inonxibelelwano oluhle. Njengokushicilelwa kwe-inki viscosity, ukwenziwa kwezinto, ukugcina inani elithile le-inki yefilimu, ukunyusa uxinzelelo kuhlala kwenza indawo yokusasazeka kweemolekyuli, kwangaxeshanye, iphepha lifakela endaweni, kodwa linxibelelana kakuhle, njenge: iphepha eligutyungelweyo kunye nephepha iipleyiti ezifanayo eziprintiweyo zokushicilela zinomahluko omkhulu, ngokucacileyo zinokuthelekisa iziphumo ezahlukeneyo zokuprinta.
Iphepha, kunye nobungakanani besiphumo sokufunxa nokuphindaphinda sinobudlelwane ngokuthe ngqo, ihlala ikumgangatho wokuprinta wezinto ezishicilelweyo, ukuba iphepha le-inki, i-viscosity ephantsi, iphepha liza kuthatha uxhulumaniso lwe-inki ngakumbi, ukuba uboya be-stoma ubukhulu obungaphezulu kobubanzi bezahlulo zombala, emva koko, nkqu nee-pigment ziyaphefumlwa, ukwanda kokuprintwa kuyancipha. Kufuneka ukonyuse ubungakanani be-inki ngokufanelekileyo. Nangona kunjalo, ukwandisa ubungqingqwa benkqantosi ye-inki, ngalo mzuzu xa kugcinwa i-embossing kuya kubangela "ukusasazeka", kuchaphazele ifuthe lokuprinta ikopi. Ukungeniswa kwephepha elincinci, kunokwenza uninzi lwefilimu ye-inki ibonakale kumphezulu wephepha, ukuze umaleko we-inki obhaliweyo ubenendawo efanelekileyo.
Ukugqwesa kwamaphepha okufumana iphepha kukhulu, kuya kwenza ubungqingqwa be-inki obucekeceke, i-pores yaphezulu yephepha inkulu, kodwa ikwenze nenxalenye yamasuntswana e-pigment afakelwe ngaphakathi ephepheni ngaxeshanye, ke kukho umbala wombala. Ukuza kuthi ga ngoku, ukusetyenziswa kobuso oburhabaxa, ukuthungwa okungafunekiyo kwephepha, kunye ne-inki fluidity kunye nephepha elikhulu, ukujonga umbala.
I-pigment ayimelana nobushushu
I-ink kwinkqubo yokomisa, i-inki yoshicilelo ekhawulezayo yokumisa irabha ikakhulu yi-conjunctiva - i-oxidation yokomisa. Ukomisa i-inki eyomileyo ngaphambi kokuba kubekho isigaba esimiselweyo, i-ink oxidation polymerization yindlela yokuphendula, ukomisa ngokukhawuleza kuya kunika ubushushu obuninzi, ukuba ubushushu bukhutshwa kancinci, abuyi kwenza umbala wobushushu obushushu. Umzekelo: umbala weinki wegolide ubumnyama kwaye ulahlekelwe bubumnandi bayo bokuqala.
Ngexesha lokushicilela, amaphepha okushicilela afunjwe koovimba, kuba axineke kakhulu, indawo esembindini yoshicilelo lwe-inki ye-oxidation yokuphendula, ubushushu akukho lula ukubuthumela, iqondo lobushushu eliphezulu kakhulu kumbindi wobumbano .
Ioyile eyomileyo inefuthe elikhanyayo
Umbala we-inki ngowethoni epholileyo, ukukhanya okuluhlaza, okuluhlaza okwesibhakabhaka, ichibi eliluhlaza kunye nenye inki yombala, musa ukusebenzisa ioyile ebomvu eyomileyo, kuba ioyile ebomvu eyomileyo enombala omsobo onzulu, iya kuchaphazela umbala weinki ekhanyayo.
Ioyile emhlophe eyomileyo ibonakala imhlophe, kodwa isihlanganisi sinombala omdaka ngombala emva kokugcwala. Ukuba ubungakanani beoyile emhlophe eyomileyo buninzi, uprinta uya kuba tyheli-mdaka xa womile, ngelixa umbala we-inki emnyama efana nohlaza, mnyama nokumfusa nge-oyile ebomvu ukomisa awuyi kuchaphazeleka kakhulu.
Iphepha lokuprinta ixabiso le-PH = 7, iphepha elingathathi hlangothi lelona lifanelekileyo, i-pigment engaqhelekanga eveliswa yi-inki ye-inki, i-alkaline ihlwempuzekile, i-pigment acid acid, i-alkaline ibhetele, ngakumbi i-inki eluhlaza okwesibhakabhaka, i-inki eblowu emnyama iya kutshabalala nealkali. I-alkali ephakathi emthubi ngombala obomvu, isitampu se-aluminium ye-electrochemical, i-India iya kuba yigolide etyheli yakudala kwizinto ze-alkaline, akukho gloss, iphepha elibuthathaka le-alkaline ngaphezulu, elihlala lidibana nokuprinta ukubopha emva kwemveliso iqulethe izinto zokuncamathelisa i-alkaline, ukuba ukupakisha ukuhombisa Imveliso yinto ene-alkaline efana nesepha, isepha, umgubo wokuhlamba njalo njalo, bonke bafuna ukuqaphela ukunganyangeki kwealkali, ukumelana nesaponification yokusebenza kwe-inki.
Impembelelo yendawo yokugcina
Uninzi lweemveliso zokuprinta zokugcina ixesha elide, ngokuqinisekileyo ziya kubonisa into etyheli, izizathu zezi zinto zilandelayo.
Ifayibha yephepha iqulethe i-lignin kunye nombala. Amaphephandaba aprintwe kwiphepha leendaba kunokwenzeka ukuba ajike abe tyheli kwaye abe krwada.
Ukushicilelwa kwe-Offset ukushicilela imibala emine kwimibala yokuprinta imibala, uninzi kwilanga, imozulu, umoya kunye nemvula, ukhukuliseko lobushushu lwangaphandle, njalo njalo, kuba i-pigment ayikukhanyisi ukukhanya, ukumelana nobushushu, kunye nombala okanye ukuphela.
Izinto zotshintsho lombala kwimicimbi eprintiweyo yahlukile kwaye akukho mveliso inokwenza yonke into. Njengale suitcase yephepha, umbala wayo unokutshintsha ngokuhamba kwexesha. Kodwa ubuncinci buhle xa siyisebenzisa.
Iyahlala kwaye kulula ukuyiphatha.
Thintela ukuba ivulwe ngokulula ngelixa uphetheyo
Inomthamo omkhulu kwaye inokubamba izinto ezininzi.
Egqithileyo Iibhokisi zesipho esenziwe ngentando ezenziwe ngebhokisi ekumgangatho ophezulu
Okulandelayo: I-logo eyenziweyo eyenziwe ngesandla yeLifa leMpahla yokuLungisa iBhokisi yokuhombisa ngeMirror Ityesi yomsesane webhokisi yobucwebe